အသုံးပြုမှုစည်းကမ်းများ - AppsApk.com
ပင်မစာမျက်နှာ » သတ်မှတ်ချက်များ
အားလုံး downloads, သာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုရန်ဖြစ်ကြောင်း, ဒီ site ကိုသူတို့ကိုရဲ့ contents တာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ပါ။ အားလုံး downloads, မပေးလျှင်, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ-ပြဿနာနှင့်ဖိုင်ကိုချက်ချင်းဖျက်ပစ်ပါလိမ့်မည်ဆက်သွယ်ဖို့မေးလ်ရေးလိုက်, အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ, ရုံးတင်စစ်ဆေးသို့မဟုတ်ကြော်ငြာထောက်ခံကြသည်။ ရေးသားသူမဖြစ်နိုင်ပါလျှင်သက်ဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုများ၏မူပိုင်ညွှန်ပြပေးရန်, ထုတ်ဝေရန်အဘို့မဆိုမူပိုင်ခွင့်ရထားသည့်ပစ္စည်းကိုသုံးပါသို့မဟုတ်ဖို့မရည်ရွယ်။
AppsApk.com သင်ဒေါင်းလုတ်လုပ်အခမဲ့ app များကို၏ရလဒ်အဖြစ်မည်သည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ထိုက်ကျင်းပလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျနော်တို့ဖိုင်တွေ 100% လုံခြုံ & လုံခြုံဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်ထုတ်ဝြေခင်းမပြုမီကွဲပြားခြားနားသော Antivirus ကိုအစီအစဉ်များနှင့်အတူအပေါငျးတို့သ app များကို scan ဘာဖြစ်လို့ရဲ့, ငါတို့၏ကိုယ်အင်္ဂါများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုသေချာစေရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ပါ။ ဒီဒေါင်းလုဒ်နှင့်အတူမည်သည့်ပြဿနာလည်းမရှိလြှငျ, ဘေးဖယ်အလုပ်၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုသို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုကနေပြန်လည်သုံးသပ်မာစတာဤဖိုင်တွင်သတင်းပို့ပါ။ စာရေးသူထောက်ပံ့သတင်းအချက်အလက်များ၏အကြောင်းအရာများ, မှန်ကန်မှု, ပြည့်စုံသို့မဟုတ်အရည်အသွေးကိုတာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ဖို့မပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ မပြည့်စုံသို့မဟုတ်မမှန်ကန်သည့်သတင်းအချက်အလက်မဆိုကြင်နာအပါအဝင်ထောက်ပံ့ပေးမဆိုသတင်းအချက်အလက်များအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့် ပတ်သက်. တာဝန်ယူမှုတောင်းဆိုမှုများထို့ကြောင့်ပယ်ချလိမ့်မည်။
AppsApk.COM မဟုတ်ရင်, ရမ်းအာမခံသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်ကိုယ်စားပြုမှုစေ, သို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်း၏ရလာဒ်များ, မှန်ကန်သော၏စည်းကမ်းချက်များ၌ applications များ၏, တိကျပြတ်သားမှု, ယုံကြည်စိတ်ချရသော, မှန်ကန်သောသို့မဟုတ်မထားဘူး။ ဒေါင်းလုပ်၏ရလဒ်များကိုနှင့်စွမ်းဆောင်မှုအဖြစ်တစ်ခုလုံးကိုအန္တရာယ်အဆုံးအသုံးပြုသူယူဆနေသည်။ AppsApk.com ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်ပေးအပ်သောဤအခမဲ့ Apps ကပကနေဖြစ်ပေါ်လာမဆိုလက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုသို့မဟုတ်ဖွစျပှားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အသုံးပြုသူအဆုံးသတ်ထိုက်မဖြစ်ရကြမည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အခမဲ့အလိုတော်မှာ Applications ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲ, သင်ပြုထည့်သွင်းမဆိုအပေါင်းတို့နှင့်တာဝန်ဝတ္တရားယူဆကြောင်းနေကြသည်။
သငျသညျ app တစ်ခု၏ထုတ်ဝေသူ, developer သို့မဟုတ်စာရေးသူဖြစ်ကြပြီးသင်က AppsAPK.com ကနေဖယ်ရှားရှိသည်ဖို့ဆန္ဒရှိခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏မှတဆင့်ကို Message ပေးပို့ကျေးဇူးပြုပြီး contact form , သင့်အမည်, ကုမ္ပဏီ, အလုပ်ခေါင်းစဉ်, ဆော့ဖ်ဝဲ၏ခေါင်းစဉ်, နှင့်ယူ-Down တောင်းဆိုချက်အတွက်အကြောင်းပြချက်အပါအဝငျ။ ကျနော်တို့ထို့နောက်သင့်ရဲ့အထောက်အထားကိုအတည်ပြုရန် 48 နာရီအတွင်းသင်ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်။